Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay saq dhexe waxa ay xireen wadooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho, maadaama maanta lagu balansan yahay kulanka Baarlamaanka oo xiisad siyaasadeed wata.
Kulanka Baarlamaanka ayaa saakay lagu balansan yahay xarunta Golaha Shacabka 09:00 subaxnimo, waxaana looga hadlayaa cod u qaadista Mooshinka ka yaalla Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo tiro Saddex jeer ah baaqday.
Ciidamo cusub oo laga soo bixiyay xerooyinkooda ayaa lagu soo daadiyay Isgoysyada Magaalada, kuwaasi oo wata Hubka culus, waxayna taagan yihiin Isgoysyada Magaalada, iyaga oo ku jira feejignaan dheeri ah.
Isgoysyada saakay xiran ayaa waxaa ka mid ah Digfeer, KPP, Bakaaraha, Hawlwadaag, Foloransa, Tarbuunka, Sayidka, Shaqaalaha KM4 iyo Isgoyska Dabka, iyada oo sidoo kale ay jiraan wadooyin kale oo xiran.
Isgoysyada Magaalada waxaa lagu jaray Gaadiidka Beebaha iyo Cabdi Bilaha oo ay hor fadhiyaan Ciidamo wata qoryaha cul culus oo uu ka mid yahay 7-ka, xitaa waxaa jirta in dad shacabka ah lugtooda in ay ku maraan loo diidayo wadada u dhaxeysa Dabka ilaa Madaxtooyada.